ကမ္ဘာကျော် လက်​ဝှေ့​သမား မန်​နီ​ပတ်​ကီ​အောင်း | J-Myanmar
လက်​ဝှေ့​သမား​တစ်​ယောက်၊ ခေါင်းကိုင်​ဖ​ခင်​တစ်​ယောက်၊ သူတော်​စင်
တစ်​ယောက်၊ နိုင်ငံ​ရေး​သမား​တစ်​ယောက်…….Manny မ​လုပ်​နိုင်​သေး​တာ ကမ္ဘာပေါ်​မှာ ရှိ​သလား??
မန်​နီ​ပတ်​ကီ​အောင်း(Manny Pacquiao) ကို လက်​ဝှေ့​သမား​တစ်​ယောက်​အဖြစ် သမုတ်​ကြ​တာ​ဟာ မ​ဟတ္တ​မ​ဂန္ဒီ​ကို ဟိန္ဒူ​ရှေ့နေ​တစ်​ယောက်​အဖြစ်
ခါ်​ဆို​ကြ​သ​လို မ​ပြည့်စုံ​နိုင်​ပါ​ဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်​မှာ အကြီး​ကျယ်​ဆုံး လက်​ရည်တူ ထိုး​သတ်​သူ​တွေ​ဟာ သူ့​ရဲ့​သွေးသံ​ရဲ​ရဲ အား​ကစား​တွေ​ထက် ပို​ပြီး​တိုး​ကာ
ခန့်​မှန်း​မ​ရအောင် ဝေး​သ​ထက်​ဝေး​သွား​ပါ​ပြီ။ ကမ်း​ကုန်​သော​ဆင်းရဲ​မှ ု​နဲ့
မွေး​ဖွား​လာ​တဲ့ ဖိ​လစ်​ပိုင်​မှာ​တော့ WBO ဝယ်​တာ​ဝိတ် ချန်​ပီ​ယံ​က
ဘာသာ​ရေး​ပုံ​ရိပ်​ဖြစ်​လု​နီးပါး​ပါ​ပဲ။ အမေ​ရိ​ကား​မှာ​တော့ သူ​ဟာ Manny Pacmanပါ – Las Vegas ရဲ့ မဟာ​ထိုး​သတ်​ပွဲ​တွေ​မှ အတု​ယူ​နိုင်​တဲ့​ပုဂ္ဂိုလ်​ပါ။ စဉ်​ဆက်​မ​ပြတ်​တဲ့ Queensbeery boxing ၏ ဘ​ရုစ်​လီ​လည်း ဖြစ်​ပါ​တယ်။
သး​ငယ်​တယ်၊ ဒေါသ​ထွက်​တတ်​ပြီး​တော့ သေ​စေ​နိုင်​လောက်​ပါ​တယ်။ “Manny Pacquiao ဟာ အံ့ဖွယ်​ပုဂ္ဂိုလ်​ပါ” လို့ မိုက်​တိုင်​ဆန်​က ပြော​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ESPN က သူ့​ကို ကမ္ဘာ့​လ​စာ​အများ​ဆုံး အား​ကစားသမား​တစ်​ယောက်​အထဲ​မှာ ပထမ​အဖြစ် ဒီ​နှစ်​ထဲ​မှာ (၂​၀​၁​၁) သတ်​မှတ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။
Pacquiao ရဲ့​ထိုး​သတ်​ပွဲ​တွေ​ဟာ သာမန်​မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ Miguel Cotto, Oscar De La Hoya, နဲ့ Shane Mosley တို့​နဲ့ ထိုး​သတ်​ပွဲ​တွေ၊ Erik Moralesနဲ့​ထိုး​သတ်​ပွဲ​တွေ၊ Juan Manuel “Dinamita” Marquez တို့​နဲ့ သုံး​ကြိမ်​မြောက် ထိုး​သတ်​ပွဲ​တွေ​မှာ​တော့ ညီမျှ​မှုမ​ရှိ​ဘဲ
သ​စေ​နိုင်​လောက်​အောင် ပြင်းထန်​တာ​ကို ပြသ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ De La Hoya နဲ့​ထိုး​သတ်​ပွဲ​မှာ ဖိ​လစ်​ပီ​နို​တစ်​ယောက်​ကို အသာ​လေး​ထိုး​သတ်​နိုင်​တဲ့​ပွဲ​လို့
ချို့​က ခန့်​မှန်း​ခဲ့​ပါ​တယ်။ သို့သော်​လည်း​ပဲ Pacquiao က သူ့​ရဲ့​တိ​ကျ​မှ ု
နဲ့​မြန်ဆန်​မှ ု​နှင့်​တ​ကွ လူသန်​ကြီး​ကို အနိုင်​ပိုင်း​ခဲ့​ပါ​တယ်။
မ​ဖြစ်​နိုင်​ဘူး​လို့​ထင်​စရာ​ရှိ​ပါ​တယ်။ Pacquiao က မ​ပြီး​ဆုံး​နိုင်​သေး​တဲ့ De La Hoya ပွဲ​မှာ အမေ​ရိ​ကန်​မြင်​ကွင်း​မှာ ၂​၀⁠၀​၁ ခု​နှစ်​က ပေါ်လာ​ခဲ့
ပါ​သေး​တယ်။ အဲ​ဒီ​တုန်း​က လူ​မ​သိ​သေး​တဲ့ သူ​ဟာ ၁​၂⁠၂​ပေါင်​ရှိ​သော
စူ​ပါ​ဘမ်​တန်​ဝိတ်​တန်း​ထိုး​သတ်​ပွဲ​မှာ Enriqure Sanchez နေရာ​က အစားထိုး​ခံ​ရ​ပြီး တောင်​အာ​ဖ​ရိ​က ချန်​ပီ​ယံ Lehlohonolo Ledwabaနဲ့ ထိုး​သတ်
ဖို့ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ Pacquiao က ၃​၂-၂ ပါ။ ဒါ​ပေ​မယ့် ဘယ်​သူ​မှ သူ​ဘယ်​သူ​ဆို​တာ မ​သိ​ကြ​ပါ​ဘူး။ (George Foreman, စကားပြော​သူ​ဟာ သူ့​နာမည်
ကို​တောင်​မှ အကြိမ်ကြိမ် အသံ​ထွက်​မှား​ထွက်​ခဲ့​ပါ​တယ်။) ပွဲ​နည်း⁠နည်း​ကြမ်း​လာ​ပြီး​နောက်​မှာ Pacquiao ဟာ Ledwaba ကို လွှမ်းမိုး​သွား​ခဲ့​ပါ​တယ်။ မည်သို့​ပင်​ဖြစ်​ပါ​စေ “Ledwaba က ဒီ​နေရာ​ကို စ​တား​ဖြစ်​ဖို့ အခွင့်အရေး
နဲ့​ရောက်လာ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် ကြည့်​ရ​တာ Pacquiao က တ​ကယ့်
စ​တား အဖြစ်​နဲ့ ထွက်ပေါ်​လာ​မယ်” လို့ Larry Merchant က ဖော်​ပြ​ခဲ့​ပါ
တယ်။ သို့သော် ဒါ​ဟာ နိုဝင်ဘာ ၂​၀⁠၀​၃ ခု​နှစ်​အထိ​တော့ မဟုတ်​သေး​ပါ​ဘူး။ ဖယ်​သာ​ဝိတ်​တန်း​အတွက် သေ​စေ​နိုင်​လောက်​တဲ့ မက်​ဆီ​ကန် Marco Antonio Barrera နဲ့ ၁⁠၁​ကြိမ်​မြောက်​ကစား​အပြီး​မှာ Pacquiao ဟာ
တ​ကယ့်​ကို အမေ​ရိ​ကန် စူ​ပါ​စ​တား​တစ်​ယောက် ဖြစ်လာ​ခဲ့​ပါ​တယ်။
ဝိတ်​တန်း​ကို နေရာ​ရွှေ့​တဲ့​အနေ​နဲ့ Pacquiao က သူ့​ရဲ ့​ဘာသာ​အယူဝါဒ ယုံကြည်​သက်ဝင်​မှ ု​မ​ရှိ​မှ ု​ကို အသံ​တိတ်​နေ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ပြီး​တော့ သူ​ရဲ့ ဆ​လစ်​ဘ​ရစ်​တီ​ဖြစ်​မှ ု​ကို အာ​ရှ​မှ ကျော်​လွန်​အောင် ဖြန့်​ကျက်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဝိတ်​တန်း​သုံး​ခု​မှာ သူ​ဟာ ယခု​တော့ ချန်​ပီ​ယံ​ဖြစ်​နေ​ပါ​ပြီ။ ခြောက်​လ​ကြာ​ပြီး​နောက်​မှာ​တော့ သူ​ဟာ မက်​ဆီ​ကန် WBA ဖယ်​သာ​ဝိတ်​ချန်​ပီ​ယံ Marquez နဲ့
ဂန္တ​ဝင်​စစ်​ပွဲ​ကို ဆင်​နွှဲ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဒီ​ထိုး​သတ်​မှ ု​ဟာ ၂​၀⁠၀​၄ ခု​နှစ်​အတွက်​တော့ အကောင်း​ဆုံး ထိုး​သတ်​ပွဲ​တစ်​ပွဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
၂​၀⁠၀​၅ ခု​နှစ်​မှာ​တော့ သူ​ဟာ ပေါင်​၁​၃​၀ စူ​ပါ​ဖယ်​သာ​ဝိတ်​တန်း​ကို ပြောင်း​ရွှေ ့​ခဲ့​ပါ​တယ်။ လစ်လပ်​နေ​တဲ့ WBCရာထူး​အတွက် Morales နဲ့​ထိုး​သတ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ သူ​ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်​တွေ ပျောက်​ဆုံး​နေ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် အဲ​ဒီ​နှစ်​နှောင်း​ပိုင်း​မှာ​ပဲ သူ​ဟာ Hector Velasquez ဆီ​က ရာထူး​ကို ရ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ နောက်​နှစ်​မှာ​တော့ သူ​က Morales ကို ပြန်လည်​တွေ့​ဆုံ​ပွဲ​မှာ အနိုင်
Pacquiao ဟာ Marquez ကို ၂​၀⁠၀​၈ မှာ ထပ်မံ​ထိုး​သတ်​ခဲ့​ပြီး​တော့ ဆုံးဖြတ်ချက်​တစ်​ခု​ရ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​နှစ်​အတွင်း​မှာ​ပဲ လိုက်​ဝိတ်​တန်း​ကို ရွှေ့​ပြောင်း
ခဲ့​ပြီး David Diaz နှင့်​တွေ့ရ်ျ WBC ရာထူး​ကို အရ​ယူခဲ့​ပါ​တယ်။ ဝယ်​တာ​ဝိတ်​တန်း​မှာ De La Hoya ကို ထိုး​သတ်​အပြီး​မှာ​ပေါ့။ အဲ​ဒါ​က ပေါင် ၁​၄​၇
တန်း​ပေါ့။ ဝိတ်​တန်း​မျိုး​စုံ​ကို အရေး​မ​ပါ​သ​လို ပြိုင်​နေ​ပါ​တော့​တယ်။ ၂​၀⁠၀​၉ ခု​နှစ်​မှာ​တော့ သူ​ဟာ ဗြိတိသျှ​နိုင်ငံသား Ricky Hatton ကို နိုင်​ပြီး IBO ဝယ်​တာ​ဝိတ်​ရာထူး​ကို ရ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ကြည့်​ရ​တာ ထိုး​သတ်​ဖို့ လူ​မ​ကျန်​တော့​ပါ​ဘူး။
တကယ်​တော့ ရက်​အနည်းငယ်​အတွင်း​မှာ​ပဲ Marquez ကို သူ ရင်ဆိုင်​ခဲ့​ရ​ပေ​မယ့် လူ​အများ​စု​ကတော့ သူ့​ပြိုင်ဘက် အမှန်​က အမေ​ရိ​ကန်​နိုင်ငံသား Floyd Mayweather ဂျူ​နီ​ယာ ဖြစ်​တယ်​လို့ ထင်​ကြ​ပါ​တယ်။ နောက်ထပ်
လက်​ရည်တူ စူ​ပါ​စ​တား​တစ်​ယောက်​ဖြစ်​ပြီး စခန်း​သွင်း​လေ​ကျင့်​ခြင်း​ဟာ Pacquiao ရဲ့ စ​တီ​ရွိုက်​ကို ယူငင်​ပြီး သူ့​လူ​တွေ​ကို ထပ်​မထိုး​သတ်​ဖို့
သွး​စစ်​ခြင်း​ကို ရှောင်​ကြဉ်​ခဲ့​သူ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ Pacquiao- Mayweather ပွဲ​ကတော့ လက်​ဝှေ့​မှာ အကြီး​မား​ဆုံး​ပွဲ ဖြစ်​နိုင်​ပါ​တယ်။
ဒီ​ထိုး​သတ်​ပွဲ​ဟာ ဖြစ်​ချင်​လည်း​ဖြစ်​နိုင်​သ​လို မ​ဖြစ်​ချင်​လည်း​မ​ဖြစ်​နိုင်​ပါ​ဘူး။ လို​အပ်​မယ်​ဆို​ရင် ရှစ်​ကြိမ်​မြောက် ကမ္ဘာ့​ချန်​ပီ​ယံ​ဟာ တခြား​အသက်မွေး
ဝမ်း​ကြောင်း​တစ်​ခု​ကို ရွှေ့​ပြောင်း​သွား​နိုင်​ပါ​တယ်။ အသက် ၃⁠၃​နှစ်​ရှိ​ပြီ​ဖြစ်​တဲ့ Pacquiao ဟာ ၂​၀​၁​ဝ​မှာ ဖိ​လစ်​ပိုင်​လွှတ်တော်​မှာ ရွေးချယ်​ခံ​ရ​ပါ​တယ်။ Sarangani လို့ခေါ်​တဲ့ မ​ပြည့်စုံ​တဲ့ ဒေသ​ကို ကိုယ်စား​ပြု​လို့​ပေါ့။ အဲ​ဒီ​မှာ
ကာင်​လေး​တစ်​ယောက်​အဖြစ်​နေ​ခဲ့​တာ​လေ။ Sarangani နဲ့General Santos တို့​က Pacquiao ရဲ့​ငယ်​ဘဝ​ရှိ​ရာ​တွေ​ပေါ့။ အသက် ၁​၄​နှစ်​မှာ
အဲ​ဒီ​နေရာ​တွေ​ကို စွန့်ခွာ​ပြီး မ​နီလာ​ရဲ့​လမ်း​ကျဉ်း​တွေ​ကြား​ထဲ​မှာ လက်​ဝှေ့​သမား​အဖြစ် ငွေ​ရှာ​ဖို့ ရောက်​ခဲ့​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် သူ​က Mindanao ကို အမြဲ​တမ်း​ပြန်​လေ့​ရှိ​တယ်။ သူ့​ရဲ ့Catholicism ကို ဖြည့်​ဆည်း​ဖို့​ရယ်၊ ဆင်းရဲသား​တွေ​ကို သူ​ပိုင်​တဲ့ ငွေ​သန်း​ချီ​ထဲ​မှ​အချို့​ကို ပေးကမ်း​ဖို့​ရယ်​ပေါ့။ ဒီ​လို
လုပ်​ခြင်း​အား​ဖြင့် သူ​ကိုယ့်​သူ ကြင်နာ​တတ်​တဲ့ အောင်​မြင်ကျော်​ကြား​သူ
တစ်​ယောက် ဖြစ်​စေ​ခဲ့​တယ်။ သူကျော်​ကြား​နေ​ချိန်​မှာ​ပေါ့။ တစ်​ချိန်​တည်း​မှာ​ပဲ သူ​ဟာ ရွှေ​ကို ဖ​ရန်​ချိုက်စ် အထိ​လည်း လုပ်​ခဲ့​တယ်။
သူ့​မှာ ကိုယ်​ပိုင်​ဖက်​ရှင်​ထုတ်ကုန်​ရှိ​တယ်။ သူ​ပိုင်​တဲ့ ရေမွှေး​ကို MP8
လို့​တောင်ခေါ်​တယ်။ ၈​မျိုး​သော ဝိတ်​တန်း​ပေါင်း​စုံ​မှာ ၈​ကြိမ်​မြောက်
ရာထူး​တွေ​ရ​ပြီး​တဲ့ အချိန်​မှာ​ပေါ့။ စ​တိုး​ဆိုင်ကြော်​ငြာ​တွေ​နဲ့
ထီ​ထိုး​နိုင်​သော​နေရာ​တွေ​မှာ အပြုံး​တစ်ဝက်​နဲ့​ပုံ​ဟာ သူတော်​စင်​လို​ပါ​ပဲ။ သူ​က Pambasang Kamao ပါ (နိုင်​ငံ့​အား​ပေါ့)။ Pacquiao က ဘာသာ
တရား​ကို အလေး​အနက်​ထား​ပြီး​နောက်​မှာ ဘာသာ​ရေး ပုံ​ရိပ်​ငယ်​တစ်​ခု ဖြစ်လာ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ထိုး​သတ်​ပွဲ​တွေ အားလုံး​ပြီး​တဲ့​နောက်​မှာ သူ​ဟာ မ​နီလာ​အနီး​မှာ​ရှိ​တဲ့ the Black Nazarene ရဲ့​ဘုရား​ဝတ်ပြု​ကျောင်း​ကို ပြန်​ရောက်လာ
ခဲ့​ပြီး ဆုတောင်း​ဝတ်ပြု​ခဲ့​ပါ​တယ်။ The Black Nazarene ဆို​တာ​တွေ
ကတော့ ၁​၆​၀​၆ ခု​နှစ်​မှာ မက်​ဆီ​ကို​က​နေ​ပြီး​တော့ galleonသ​ဘောၤ​နဲ့
ကျွန်း​တစ်​ကျွန်း​ကို ခရီး​ကြမ်း​သွား​ခဲ့​ကြ​တဲ့​အတွင်း မီးလောင်​ကျွမ်း​တဲ့
ခရစ်တော်​ရဲ့​ရုပ်တု​ကို ရှိခိုး​ကြ​သူ​များ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
Manny Pacquiao ကို​တွေ့​ဖို့ ဖိ​လစ်​ပိုင်​ကို သွား​တာ ရူး​သွပ်​တာ​ပါ​ပဲ။ သူ့​ရဲ့ လက်ထောက်​တစ်​ယောက် ပြော​သ​လို​ပဲ အဲ​ဒါ​ဟာ Jesus Christ နဲ့ နေ့​လည်​စာ​စား​ဖို့ ကြိုးစား​သ​လို​ပါ​ပဲ။
မည်သို့​ပင်​ဆို​စေ​ကာ​မူ ကျွန်တော်​ရောက်​အောင်​သွား​ခဲ့​ပါ​တယ်။ မိုး​သည်းထန်​စွာ​ရွာ​သွန်း​နေ​ချိန်​မှာ​ပဲ သူ့​ကို မ​နီလာ​လေ​ဆိပ်​မှာ ပထမ​ဦး​ဆုံး​တွေ့​ခဲ့​ပါ
တယ်။ သူ့​ကိုယ်​ပိုင်​အစီ​အစဉ်​ဖြစ်​တဲ့ Manny Many Prizes ကို သရုပ်ဆောင်​ဖို့​လာ​တဲ့​နေရာ​ပေါ့။ စနေနေ့ ည​၆​နာရီ​တိုင်း ရုပ်​သံ​လွှင့်​တဲ့​ဟာ​ပေါ့။ သူ​ဟာ ဆိုက်ရောက်​ခန်းမ​ကို တည်⁠တည်​ငြိမ်⁠ငြိမ်​ရောက်လာ​ပြီး ချက်ချင်း​ပဲ သူ့​ကို လူ​တွေ​ဝိုင်း​အုံ​သွား​ပါ​တယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် ခဏ​လေး​အတွင်း​မှာ​ပဲ သူ​ပျောက်​သွား​ပါ​တယ်။ ရဲ​အုပ်​အကာအကွယ်​တွင်း ရောက်​သွား​ပြီး လန်​ခ​ရူ​ဇာ ကား​တစ်​စီး
နဲ့​ပေါ့။ Pacquiao ရဲ ့​လက်​ကို ခု​န​က ဆွဲ​နှ ုတ်​ဆက်​ထား​တဲ့ လက်​ကို​သာ
ဖတ်​ခဲ့​မယ်​ဆို​ရင် လက်ဆောင်​ပစ္စည်း​ရှာဖွေ​သူ​တွေ​ကို ကျွန်တော်​ရောင်း​မိ​မှာ​ပဲ။
မ​နီလာ​တ​ဝိုက်​မှာ Pacquiao ကို​ရှာ​ဖို့​ဆို​ရင် ဇွဲ​ကောင်း​ရ​ပါ​မယ်။ တိုင်​ဖွန်း
မိုး​ရေ​တွေ​ကြားမှာ သူ့​ကို အသည်းအသန်​လိုက်​ခဲ့​ရ​တယ်။ ဘာ​လို့​လဲဆို​တော့ Cuneta Astordome အား​ကစား​ရုံ​ကို Pacman နဲ့ အတူတူ ဝင်​ဖို့​ပေါ့။ ဒီ​ည​အစီ​အစဉ်​အတွက် အစမ်း​လေ့ကျင့်​တာ​က တစ်​ညနေခင်း​လုံး​ကုန်​သွား
ပါ​တယ်။ ပွဲ​တက်​သူ တစ်​ယောက်​အနေ​နဲ့ အဝတ်​အစား​လဲ​ခန်း​ထဲ​မှာ
ကျွန်တော် ထိုင်​နေ​ပြီး သူ့​လူ​တွေ​ကို ဘယ်​လို စီမံ​ကိုင်တွယ်​လဲဆို​တာ ကြည့်​ခဲ့​ပါ​တယ်။.
ခြေ​အိတ်​အဖြူ​ဝတ်​ပြီး ဆို​ဖာပေါ်​မှာ​မှီ​ကာ D&G ဖိနပ်​နှင့် ဟာ​မတ်​ခါး​ပတ်​ကြီး​ဝတ်​ထား​တဲ့ ဒီ​လူကြီး​ကတော့ ခြေထောက်​ကို အနှိပ်​ခံ​နေ​ပါ​တယ်။ လိပ်ပြာ​တီ​ဗီ​ရုပ်​သံ​ဇာတ်​လမ်း​တွဲ​မှ သရုပ်ဆောင်​တွေ အရိုအသေ​ပေး​ဖို့ စ​ပါ​တန်​ကြီး​အခန်း​ကို ဝင်​ထွက်​လုပ်​နေ​ချိန်​မှာ ခေါင်း​တလည်လည်​ဖြစ်​နေ​ပါ​တယ် သူ​က။
Pacquiao က သူ့​ရဲ့​အစီ​အစဉ်​ကို တကယ်​နှစ်ခြိုက်​ပါ​တယ်။ လူ
ပရိသတ်​၄​၀⁠၀​ဝ​က​နေ နံပါတ်​တွေ​ကို ကိုင်​ထား​ပြီး အဲ​ဒီ​ထဲ​က ကျ​ပန်း​ရွေးချယ်​ကာ သူ​ပေး​တဲ့ ဆု​တွေ​ရ​ယူ​နိုင်​တဲ့ တိုက်ရိုက် အစီ​အစဉ်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ဒါ​ကတော့ ပြန်​စွန့်ကြဲ​တာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အစမ်း​လေ့ကျင့်​စဉ်​အတွင်း
ညနေခင်း​မှာ Pacquiaoဟာ တီး​ဝိုင်း​ရဲ့​စန္ဒ​ယား​ကို သွား​ပြီး “Let it be” ကို တီး​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​နောက်​မှာ သူ​က ဂစ်​တာ​တီး​ပြီး သီချင်းဆို​ပါ​တယ်။ သင်​က
နိုင်​ငံ့​အား​ဖြစ်​နေ​ပြီ​ဆို​ရင် တ​ဖန်​ပြန်လည် အသက်​ဝင်​တတ်​တဲ့​သူ ဖြစ်​ဖို့ လို​အပ်​ပါ​တယ်။
Pacquiao ရဲ့​အရင်း​နှီး​ဆုံး အကြံပေး​တွေ​ထဲ​က တစ်​ယောက်​ကတော့
ရှေ ့​နေ Franklin Gacal ဖြစ်​ပါ​တယ်။ Pacman ရဲ့​စီးပွား​ရေး အပေး​အယူ​လုပ်​တာ​တွေ​မှာ အပြုံး​ချို⁠ချို​လေး​နဲ့ ဆက်ဆံ​တတ်​သူ​ပေါ့။ “ဒီ​အသိုင်း​အဝန်း​ဟာ သူရဲကောင်း​များ​ကို ရှာဖွေ​နေ​တဲ့ အသိုင်း​အဝန်း​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ လူ​အများ​စု​က
ဆင်းရဲ​ပြီး​တော့ ဘဝ​တွေ​က နုံ​ချာ​လှ​ပါ​တယ်။ Manny က မျှော်လင့်​ချက်​ပုံ​ရိပ်​ပါ​ပဲ။ သူ့​လို​မျိုး ကမ္ဘာကျော်​တာ​က အရင်​တုန်း​က မ​ထွက်ပေါ်​ဖူး​ဘူး​လေ။
ပီး​တော့ ဒါ​မျိုး​က​လည်း နောက်ထပ်​ထပ်​မ​ဖြစ်​နိုင်​ဘူး။ သူ​က တစ်​နေ့​မှာ
သမ္မတ​ဖြစ်​နိုင်​ပါ​တယ်။ “ လို့ Gacal နဲ့ သောက်​ရင်း ပြော​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
အဲ​ဒီ​ည​က အစီ​အစဉ်​ကတော့ အားဖြည့်​တဲ့​ဆွေးနွေး​ပွဲ တစ်​ပွဲ​လို​ပါ​ပဲ။ ပွဲကြည့်​ပရိသတ်​တွေ​က အဝေး​က​နေ သူ့​ကို ကိုယ်​တွေ့⁠တွေ့​ဖို့ လာ​ခဲ့​ရ​ပါ​တယ်။ လူ​အများ​က လမ်းပေါ်​မှာ တဲ​ထိုး​နေ​ခဲ့​ရ​တယ်။ သူ​တို့ ထိုင်​ခုံ​ရှည်​တွေ​မှာ ထိုင်​ပြီး အနီ​ရောင်​ကဒ်​တွေ ဝှေ့​ကာ​ရမ်း​ကာ​နဲ့ စောင်း​ပြီး ရေရွတ်​သီ​ဆို​ခဲ့​ပါ​တယ်။ cheerleader တွေ​ရဲ ့​အလှည့်​အပြီး​မှာ Pacman ဟာ အေး​ခဲ​နေ​တဲ့ ပုံစံ​နဲ့ စင်​အနောက်​ဘက်​က​နေ ဂျင်း​ဝတ်​စုံ​နဲ့ထွက်ပေါ်​လာ​ခဲ့​တယ်။ John Travolta လို​မျိုး က​လိုက်​တယ်။ မိုက်​က​ရို​ဖုန်း​က​နေ သူ့​လူ​တွေ​ကို ဘာ​လိုချင်​သလဲ​လို
အော်​တဲ့​အခါ​မှာ သူ​တို့​တွေ​က “သွား​လာ​ရေး​စရိတ်” လို့​ပြန်အော်​ကြ​ပါ
တယ်။ ပွဲ​ကို​လာ​ရ​တဲ့ စရိတ်​ကို ကာ​မိ​အောင်​ပေါ့။ “ninong(ခေါင်းကိုင်​ဖ​ခင်)” လို့အော်​နေ​တာ​ကို ငါ​ကြား​ရ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒါ​က အော်​စရာ​ဖြစ်​သွား​ပါ​တယ်။ “သင်​တို့​ဘာ​တွေ​လို​အပ်​နေ​လဲ၊ ကျွန်တော်​အမြဲ​နားထောင်​နေ​ပါ​တယ်” လို့ သူ​က​တုံ့​ပြန်​ပါ​တယ်။ “ကျွန်တော့်​ကို​သာ​ပြော​ပါ” ။ ပြီး​တော့ သူ​က ကံ​ထူး​သွား​တဲ့ နံပါတ်​တွေ​ကိုင်​ထား​တဲ့ နေရာ​ကို သွား​ပါ​တယ်။ “သင်​တို့​အားလုံး ပါဝင်​နိုင်​ပါ​တယ် အမေ​ရိ​ကန်​တွေ​က​လွဲ​လို့​ပေါ့” လို့ ကျွန်တော့်​ကို ကြည့်​ရင်း ပြော​ပါ
တယ်။ တစ်​ယောက်​တည်း​ရှိ​ပြီး လူ​ဖြူ​ဖြစ်​သော ကျွန်တော်​က ဦးညွတ်​လိုက်​ပါ​တယ်။
စင်ပေါ်​ကို​တက်​လာ​သူ​တွေ​ကတော့ သနား​စရာ​ကောင်း​တဲ့ ကံ​စမ်း​မဲ​ပေါက်​သူ​တွေ​ပါ​ပဲ။ သွား​မ​ရှိ​တဲ့ အမေ​အို​တွေ၊ ဖျားနာ​နေ​သူ​တွေ​နဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါး​သူ​တွေ​ပါ​ပဲ။ Pacquiao က သူ​တို့​ကို အင်တာဗျူး​လိုက်​ပါ​တယ်။ ဆန်​မုန့်​ရောင်း​ပြီး အဝတ်​တွေ​ကို​ယူလျှော်​ကာ အသက်မွေး​ရ​တဲ့ သက်ကြီး​ပိုင်း​အမျိုးသမီး​တစ်​ယောက်​က သူ့​အမေ​ကို သတိရ​မိ​စေ​ပါ​တယ်။ သူ ကောင်​လေး​ဘဝ​တုန်း​က ဒီ​လို​ပဲ​ကျွေးမွေး​ခဲ့​တာ​ပေါ့။ တိုးတက်​လာ​ပြီး
နောက်​ပိုင်း​မှာ သူ​က​ရုတ်​တရက် ပီ​ဆို​တစ်​သိန်း​အထိ​ရ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ သေတ္တာ​တွေ​မှာ ချက်​ပြုတ်​တဲ့​ပစ္စည်း​တွေ၊ စက်ဘီး​အသစ်​တစ်​စီး​နဲ့ ငွေ​တစ်​ထပ်​တို့​နဲ့ ပြည့်​သွား​ပါ​တယ်။ ပရိသတ်​တွေ​က “Ninong” လို့အော်​နေ​ကြ​ပြီး
အစီ​အစဉ်​ပြီး​သွား​ချိန်​မှာ​တော့ Pacquiaoဟာ သန်းခေါင်ကျော်​ရင် သူ​လုပ်​နေကျ​အတိုင်း လုပ်​ဖို့​ဆုံးဖြတ်​ခဲ့​ပါ
တယ်။ ဘိ​လိ​ယက်​ထိုး​ပြိုင်​တာ​ပါ။ မ​နီလာ​မြို ့​လယ်​မှာ​ရှိ​တဲ့ Pan Pacific မှာ ကျွန်တော်​တို့​စု​ကြ​ရ​ပါ​တယ်။ ဟိုတယ်​ထိပ်​ဆုံး​မှာ ဘိ​လိ​ယက်​ထိုး​နိုင်​သော​ခန်းမ​ရှိ​နဲ့ ဗီ​အိုင်​ပီ​အခန်း​တစ်​ခန်း​ရှိ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​မှာ အနက်​ရောင်​သားရေ ဆို​ဖာပေါ်​မှာ သူ​အနား​ယူ​လေ့​ရှိ​ပါ​တယ်။ Pacquiao က စားပွဲ​ဆီ​ရောက်​တာ​နဲ့ မ​ရှောင်​သာ​တဲ့ လူ​အုပ်​က စုဝေး​ရောက်​ရှိ​နေ​ပါ​တယ်။ ပြီး​တော့ သူ​က ဘိ​လိ​ယက် ချန်​ပီ​ယံ Efren “Bata” Reyes နဲ့ အပြိုင်​ထိုး​ပါ​တယ်။ အနိုင်​ရ​ဖို့​မ​ဖြစ်​နိုင်​တဲ့ သူ​ပါ။ ဒါ​ပေ​မယ့် သူ​နဲ့​ဆို​ရင်​တော့ Pacman က ပိုက်ဆံ​နဲ့​လောင်း​ရ​တာ ကြိုက်​ပါ​တယ်။ Bata က ဘော​လုံး​တိုင်း ဝင်​အောင် ထိုး​နိုင်​ပါ​တယ်။ ကြည့်​ရှု​သူ​တွေ​က တိတ်ဆိတ်​ငြိမ်​သက်​နေ​ကြ​ပါ​တယ်။ Pacquiao နဲ့ ဆွဲ​ဆောင်​မှ ု​ကတော့ အသိ​အမှတ်ပြု​စရာ​ပါ​ပဲ။ လူ​အုပ်​ကြီး​က Pacquiao အာရုဏ်​မှာ အိပ်ရာ​ဝင်​တဲ့​အထိ​တိုင်အောင် အဲ​ဒီ​မှာ​စောင့်​ကြည့်​ကြ​ပါ​တယ်။ သုံး​နာရီ​ကြာ​ပြီး​နောက်​မှာ
သူ​နိုး​လာ​ပြီး​တော့ နှစ်​နာရီ​ကြာ လေ​ယာဉ်​စီး​ပြီး General Santos ဆီ​ကို သွား​ပါ​တယ်။ သူ​ဘယ်​အချိန်​တွေ
Next post Die Hard Mission in Myanmar
Previous post သမီး​လေး​တစ်​ယောက် သိ​စေ​ချင်​တယ်